बिहे गर्न लमी चाहियाे ? आयो ‘पञ्चेबाजा’ एप - DURBAR TIMES
HomeScience & Technologyबिहे गर्न लमी चाहियाे ? आयो ‘पञ्चेबाजा’ एप
तपाइँ विवाह गर्न लागिरहनुभएकाे छ र तपाइँले खाेजेजस्ताे भनेजस्ताे वर वा वधु प्राप्त गर्न सक्नुभएकाे छैन भने अब तपाईँकाे तनाव हट्ने भएकाे छ ।
घरमै बसीबसी उपयुक्त वर वा वधू खोज्नका लागि हाफफूल टेक्नोलोजीले ‘पञ्चेबाजा’ एप ल्याएको छ । यस एपबाट तपाईले छाेराछाेरी अथवा कुनै आफन्तका लागि वर वा वधू खोज्न खोज्न सक्नुहुनेछ ।
यदि तपाई आफैं केटा वा केटीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाइँलाइ याे एपले भरपुर सहयाेग गर्ने छ । विश्वमा यस प्रकारका धेरै एपहरु प्रयोग हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि केहि अमेरिकन डेटिङ एप टिन्डर, भारतीय एप साथी लगायतका एपहरु प्रयोग हुने गरेका छन् ।
गत दशैंअघि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको यस एपबाट भने डेटिङमात्रै होइन, जीवन साथी नै खोज्न सकिने छ । आफूले चाहेजस्तो वर वा वधू खोज्न सहज बनाउने उद्देश्यले नै एप ल्याइएको कम्पनीका संस्थापक/सञ्चालक सन्दिप पौड्याल बताउँछन् ।
यो एप एन्ड्रोइड र आइफोन दुबैमा माेडलमा उपलब्ध रहेको छ । प्लेस्टोर वा एप स्टोरमा गएर ‘पञ्चेबाजा’ एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो प्राेफाइल बनाउन सक्नुहुनेछ ।
तस्वीरसहितको प्रोफाइल बनाएपछि तपाईले चाहेको पार्टनर कस्ताे हाे त्यसकाे बारेमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।
फेक प्रोफाइल नबनाेस भनेर एपले अरु फोटो पछि सेल्फी फोटो पनि अपलोड गर्नुस् भन्नेछ । सेल्फी र अन्य फोटो मिलेन भने एपले ‘रातो’ संकेत गर्नेछ । जसलाई शंस्कास्पद मान्न सकिन्छ । सेल्फी’ र अन्य तस्वीरहरु मिलेकेा अवस्थामा भने यो फेक होइन भनेर ‘हरियो’ चिन्ह देखिनेछ । झुक्याउनका लागि प्रोफाइल बनाउनबाट यसले रोक्नेछ । भविष्यमा अझ धेरै सुरक्षा सतर्कता बनाउने कम्पनीको तयारी छ ।
कुन क्षेत्रमा रहेकेा मान्छे चाहियो त्यो राखेपछि त्यहीँ क्षेत्रको मान्छेमात्रै तपाईका लागि देखाउँछ । केटी खोजेको हो भने केटीमात्रै र केटा खोजेको हो भने केटामात्रै देखाउँछ ।
अहिले एपमा मात्रै रहेको र केहि महिनाभित्रै यसलाई वेवमा पनि उपलब्ध गराउने कम्पनीको तयारी छ ।
Previous articleकहिले हुन्छ लाइसेन्सको परीक्षा?
Next articleथप १ हजार ४ सय ९० जना कोरोना संक्रमित